कपन क्षेत्रमा अबको २२ महिनाभित्र पानी आउनुपर्छ, कुनै बहानाबाजी चल्दैन : डा. राजन भट्टराई « Pariwartan Khabar
कपन क्षेत्रमा अबको २२ महिनाभित्र पानी आउनुपर्छ, कुनै बहानाबाजी चल्दैन : डा. राजन भट्टराई
२३ कार्तिक २०७६, शनिबार १७:२१
२३ कात्तिक २०७६, काठमाडौं
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ८,९,१०,११,१२,१३ मा खानेपानीको अल्पकालिन र दीर्घकालिन समस्या समाधानको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रिय सस्य तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यतामा कपनमा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि डा. भट्टराईले, ‘खानेपानी जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा जुन खालको अप्ठ्यारो भोग्नु परेको छ, यो कुराको महशुस गरी हामीले ४ बर्षभन्दा बढी निरन्तर पहल गरेका हौँ । हामीले हाम्रो आगनबाट मेलम्चीको पानी जाने अनि हामी काकाकुल भएर बस्नुपर्ने त्यसमाथि तपाईहरु रिङरोडभित्र पानी कसरी लान सक्नुहुन्छ ? यस किसिमको कुरा गरेर हामीले यो आयोजना यहाँ पार्न सफल भएका हौँ ।’
साथै उनले, ‘अब ठेकेदारको बारेमा धेरैको जिज्ञासा होला । यसमा हाम्रो पनि विश्वास छैन । जसले सडक त राम्रोसँग बनाएको छैन, उसले यति ठूलो खानेपानी योजनाको काम कसरी गर्ला ? यो दुर्भाग्य नै हो कि हाम्रो कानून नै त्यस्तै छ । हामीले कानून अनुसार नै चल्ने गरेका छौँ । कानूनले जग्गा जसले थोरै पैसा हालेको छ उसलाई दिने कि हिजोको दिनमा उसले के कस्ता काम गरेको छ भन्ने हिसाबले दिने ? यो हाम्रो खरिदारीमा रहेको क्रुटिहरुका कारण ठेकेदारहरुले फाइदा लिइरहेका छन् । त्यो फाइदा अन्तर्गत खानेपानी आयोजना पनि परेको छ । तर अब बुझ्नु के पर्यो भने यो मुलुकमा हिजोजस्तो कानून ठगेर, छलेर म बच्छु भन्ने चाहिँ नसोच्दा हुन्छ । वरिष्ठ व्यक्तित्व कृष्णबहादुर महराले त बच्न पाउनु भएन अब ठेकेदारले त्यसबाट उम्किन्छु भन्नु सम्भव छ ? आलमलाई पनि मलाई कसैले समाउन सक्दैनन् भन्ने लागेको थियो तर आज उनी जेल जानु परेको छ । कानूनभन्दा माथि गएर काम गर्दा त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्रीका सहयोगी पनि हुन्छन्, मन्त्री, सम्मानीय पद धारण गरेका र सम्पूर्ण नागरिकक पनि हुन्छ । किनकी कानूनको अगाडी सबै बराबर हुन् । कानूनको उल्लघंन गर्दा त्यसको भागेदार सबैजना हुन्छ । कानूनबाट कोही उम्किन पाउँदैन भन्ने कुरा अहिले स्थापित हुदैँ गएको छ । ’ भनी आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ई. मिलन कुमार शाक्यले पुरानो पाईप भएकोेले सवैतिर पानी पुग्न असम्भव भएपनि चुहावट मर्मत गर्ने र आएको पानी सकेसम्म समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्न आफूले पहल गरिरहेको बताए ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख भोजविक्रम थापाले डा. राजन भट्टराईको पहलमा विस्तार गरिएको कपन क्षेत्रको खानेपानी परियोजना बाँकी रहेको २२ महिनाभित्र पुरा गरिने जानकारी गराए । थापाले परियोजनाबारे जानकारी दिन विभिन्न स्थानमा सम्पर्क नम्बर सहितको होर्डिङ्ग बोर्ड राखिने, वडा स्तरिय छलफलहरु संचालन गर्ने बताउँदै कम्प्युटर प्रणालीबाट नियन्त्रण गरिने खानेपानी परियोजना ठेक्काको म्यादभित्रै सकिनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धवप्रसाद खरेलले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग मिलेर काम गरिरहेका बताउँदै नगर क्षेत्रभित्र ३९ वटा खानेपानी उपभोक्ता समिति रहेको जानकारी दिए ।
ठेकेदार, कम्पनीका प्रतिनिधिले अघिल्ला परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न नगरेर आफ्नो कम्पनीको छवी बिगारेको स्वीकारोक्ती गर्दै अबको परियोजनालाई कुनैपनि हालतमा समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नगरप्रवक्ता तथा बूनपा १० का वडाध्यक्ष नवराज भट्टराईले डा. राजन भट्टराईको पहलमा विस्तारित परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न जनप्रतिनिधिले खेल्नुपर्ने जस्तोसुकै भूमिकाको लागि आफू तयार रहेको बताउँदै तोकिएको समयभित्रै परियोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सरकारी निकाय तथा ठेकेदार कम्पनीलाई अनुरोध गरे ।
बूनपा ११ का वडाध्यक्ष राजु अधिकारीले स्वागत गर्दै तोकिएको समयभित्र खानेपानी उपलब्ध गराउन आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै ठेकेदार कम्पनी प्रति आशंका व्यक्त गरे । त्यसैगरी बूनपा १२ का वडाध्यक्ष तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराईले विगतमा कमजारी गरेको कारण शैलुङ्ग कन्सट्रक्सनको बदनाम भएको बताउँदै आगामी दिनमा नसच्चिए जनताले नछाड्ने चेतावनी दिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख रमादेवी राई, वडा नं. ८, ९, १३ का वडाध्यक्षहरु, नगर सल्लाहकारहरु, स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा नागरिकहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
चितवनमा कोरोनाबाट ३ जनाको मृत्यू
उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा ‘करिब अन्त्य’, के–के गर्न पाइँदैन ?